एजेन्सीको बलमा बनाइयो डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री | Citizen Post News
एजेन्सीको बलमा बनाइयो डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री
२०७४ फागुन २९ गते १३:४०
काठमाडौं । दुई तिहाई भन्दा बढि विश्वासको मत पाए पनि केपी ओली सरकारका हरेक नियुक्ति दक्षिणी छिमेकी भारतको इशाराभन्दा बाहिर नहुने गरेको तथ्य खुलेको छ । यो तथ्य दुई पटक योजना आयोगका उपाध्यक्ष, एक पटक गर्भनर भएका डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य नियुक्ति गर्दै अर्थ मन्त्रालय जिम्मा लगाउने घटनाक्रमसँग जोडिएको छ ।
झापाली भएका कारण ओलीको मायाले उनी अर्थमन्त्री बनेको हल्ला चलाइएपनि त्यसो नभएर भारतीय एजेन्सीको आदेशका आधारमा उनी अर्थमन्त्रालयमा पुगेका हुन् । त्यसका लागि बालुवाटार छिरेका रअका अधिकारीको दबाब थेग्न नसकेपछि ओली खतिवडालार्ई अर्थराज्यमन्त्री नभएर अर्थमन्त्री नै बनाउन बाध्य भएका हुन् ।
डा. खतिवडाको प्रयोगमा नै भारतका विभिन्न ठेक्कालाई अनुमति चाँडो दिलाउने र भारतीय उद्योगका करमा समेत सहुलियत गरिदिने सर्त भारतीय अधिकारीले राखेका छन् । उनी गभर्नर हुँदा पनि भारतीय पैसा नेपालमा ठूलो परिमाणमा चलखेल भएको थियो । ‘भारतीय डीजाइनका आधारमा भएका कारणले नै उनीविरूद्ध मुद्दा हुँदाहुँदै हतारमा अर्थमन्त्री नियुक्ति गरियो, मुद्दालाई पनि किनारा लगाउन भारतीय चलखेल भयो’, स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रिय सभा नियुक्ति हुनासाथ उनीलगायत तीन जनाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाईलाई मतलव नगरी प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडलाई नियुक्त गरेका थिए । सो नियुक्तिसँगै केही विवाद भए पनि पछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएन । ‘यहाँका हरेक सिस्टममा भारत हावी भएको कुरा सामान्य हो, यसैको परिणाममा खतिवडाको मुद्दा पनि किनारा लगाउने कोशिश भएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
खतिवडालाई अर्थराज्यमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय सुझावका आधारमा ओली राजी भएका थिए । उनलाई पोखरेलको सल्लाह अनुसार नै राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत बनाइएको थियो । ओली पनि अर्थराज्यमन्त्री बनाउनका लागि तयार थिए । तर, भारतीय अधिकारीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री नै बनाउनका लागि दबाब दिएपछि ओली पछि हट्न सकेनन् ।
यसका लागि भारतीय इन्टेलिजेन्स व्युरो 'रअ' का अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनलाई अर्थमन्त्री मै नियुक्ति गर्नुपर्ने भारतीय प्रस्ताव एमाले स्थायी कमिटिमा समेत पुगेपछि कसैले त्यसको विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्रीका लागि पोखरेल र पाण्डेको दौड थियो । यतिसम्मकी बाम गठबन्धनकै समर्थन जुटाएर अर्थमन्त्री बन्नका लागि पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत सहमति जुटाउन खुमलटार धाइरहेका थिए ।
झापाका भएका कारणले खतिवडाप्रति ओली लोयल थिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला खतिवडालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नका लागि पोखरेलले नै दबाब दिएका थिए । त्यसबेला पोखरेल नेपाल समुहमा थिए । ओली पार्टी सत्ता भन्दा बाहिर थिए भन्ने खबर आजको जनप्रहारमा छाएिको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भन्यो, ‘निजी बनाएर हत्याउन खोजियो’
२०७५ फागुन १० गते २१:५८
भारतलाई जिम्मा लगाएको जमीन फिर्ता गर्न बेलायतसँग माग
२०७५ फागुन १० गते २१:१५
तीन दिने स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन
२०७५ फागुन १० गते २०:५१